Ireo tsy matahotody 
Handeha araka ny nanoratana Azy
Alarobia 08 aprily 2020 — Alarobia Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 26, 14-25 — Arahaba, ry Mpanjakanay, Ianao irery no niantra anay tamin'ny hadisoanay.
Voatavo tsy mifandraka  (Tantara) 08/04/2020 08:40
Masimbavy Julie Billiart (Kintan'ny finoana) 08/04/2020 06:30
Handeha araka ny nanoratana Azy (Tenin'ny Tompo) 08/04/2020 04:00
Voatavo tsy mifandraka  (Tantara) 07/04/2020 08:40
Masindahy Jean-Baptiste de La Salle (Kintan'ny finoana) 07/04/2020 06:30
Hamadika Ahy... Handà Ahy... (Tenin'ny Tompo) 07/04/2020 04:00
Masindahy Marcellin de Carthage (Kintan'ny finoana) 06/04/2020 06:30
Avelao izy... (Tenin'ny Tompo) 06/04/2020 04:00
Tsiky ao anatin'ny haizina  (Tantara) 05/04/2020 13:00
Masindahy Vincent Ferrier (Kintan'ny finoana) 05/04/2020 06:30
Naseho ny : 24 marsa 2020
Nahazo namana hiara-mipetraka aminy araka ny nangatahany tamin'i Njaka i Jaona. Afaka ny tebiteby sy ny tahotra mahazo azy satria tsy irery intsony izy hiatrika ny fanakorontanana isak'alina nahazo azy sy ireo roa lahy nodiambiasany teo aloha. Very hevitra amin'ny fomba atao hisavana ireo volamena ao an-tanànan'i Njaka i Rasedy noho ny fisian'i Jaona, tsy hahafahany migalabona amin'ny fisavana ny trano rehetra.
2020-04-08 / 18:56:59 - Nanolotra vola 6 hetsy sy iray tapitrisa ariary ho fanampiana ny mpiasan’ny fahasalamana amin’izao ady amin’ny valanaretina entin’ny coronavirus izao ny filoha teo aloha, ny Amiraly Didier Ratsiraka. Nankahery ireo rehetra misehatra amin’izay tontolon’ny fahasalamana izay koa ny tenany. Tsy voavidim-bola, hoy ny Amiraly, ny asa sy adidy ataon’ireo ao anatin’ny « brigade d’intervention spéciale covid-19 », manao ny ainy tsy ho zavatra manoloana ny valanaretina. Ho fankasitrahana sy ho fankaherezana azy ireo dia nanolotra io vola io ho azy ireo ny tenany. Nambaran’ny Amiraly Didier Ratsiraka fa ny vola fisotron-dononony volana marsa, amin’ny maha filoham-pirenena teo aloha azy, io atolony ho fanampiana ny mpiasan’ny fahasalamana miady amin’ny covid-19 io.
2020-04-08 / 18:46:53- Nitombo 5 indray ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus eto Madagasikara. « Cas contacts » na tranga vokatry ny fifampikasohana ny 4 amin’ireo ary « cas importé » tamin’ny mpandeha tamin’ireo sidina avy any ivelany ny iray. Miisa 93 izany hatramin’izao ny olona voamarina tamin’ny fitiliana avy eny amin’ny Institus Pasteur de Madagascar fa mitondra ny tsimokaretina. Momba ireo marary 5 vaovao kosa dia tsaboina eny amin’ny hôpitaly Befelatanana ny 2 amin’ireo, lehihahy iray sy vehivavy iray ary any amin’ny faritra Analanjirofo kosa no tsaboina ny lehilahy 2 hafa. Ankoatra ireo voatily vaovao kosa anefa dia misy olona 4 indray no vaolaza fa sitrana, androany. Tany Toamasina ny 3 ary teny Anosiala ny 1. Mitontaly 11 izany izao ireo narary voaporofo fa sitrana ireo. Noho izany, miisa 82 hatramin’izao ireo marary mbola tsaboina eny amin’ireo hôpitaly samihafa eto Madagasikara. Mbola tsy misy kosa ny namoy ny ainy.